VidLib | IOS Appka | Platform Footage Stock - kiis daraasad - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Daraasadda Xaaladda: VidLib
Markii ay soo baxeen iPhones, iPads, iyo kamaradaha DSLR ee toogashada fiidyaha, fursaduhu waxay ahaayeen kuwo aad u wanaagsan isku-duubnida fiidiyowga. Markaa waxaanu soo saarnay abka VidLib, oo ah goob-ka-soo-baxa saamiyada ugu horreeya ee loogu talagalay dhammaan aaladaha iyo dhufto ee. VidLib waxa ay haysataa in ka badan 100.000 royalty oo bilaash ah balse muuqaal muuqaal ah oo qiimo jaban leh oo aad shati ku siiso si fudud oo aamin ah iibsashada abka adiga oo isticmaalaya qalabkaaga. Royalty free macnaheedu waa in aad bixisid fiidyowga hal mar ka dibna waxaad u isticmaali kartaa mashruucyo aan xadidnayn oo aad dadweynaha u soo bandhigi kartaa clip-ka meel kasta, xitaa sawir mooshin ah. Dhammaantood waa la sii nadiifiyey oo diyaar u ah inay tagaan. Hadda taasi runtii way fududahay sax? Shati siinta fiidyaha iyadoo la isticmaalayo VidLib waxa lagu samayn karaa dhawr tabo oo laga bilaabo furitaanka abka oo la dhammaystiro dhammaan nidaamka diiwaangelinta, gadashada iyo soo dejinta. Marka la eego VidLib arrimuhu waa sida ugu fudud ee suurtogalka ah mana jirto wax dhib ah oo ka baxsan shatiga shatiga. Waxaan haynaa muuqaalo kayd ah oo boqortooyo ah oo gacanta lagu soo doortay oo cajiib ah maktabadeena ayaa maalin walba koraysa. Dhammaan sawirada waxaa sameeyay xirfadlayaal isticmaalaya qalabka kamaradaha ee xirfadlayaasha ah, moodooyinka iyo moodooyinka la sii daayo. In yar oo ka mid ah sifooyinka uu VidLib ku qalabaysan yahay ayaa ah helitaanka in ka badan 30000 clips, awood u leh inaad ku soo dejiso faylasha HD kombiyuutarkaaga emaylka si aad wax uga beddesho Final Cut iyo inaad ku badbaadiso fiidiyowyada la jecel yahay ee qalabkaaga Facebook, awood u leh inaad kor u qaaddo iibka fiidiyaha sare iyo inaad u rogto muuqaalka muuqaalka si aad shaashad buuxda u daawato fiidyowga. VidLib waa il weyn oo loogu talagalay sawirada haddii aad yar tahay ganacsi, shirkad xayaysiis ah ama farshaxan raba muuqaal saamiyo cajiib ah oo heer macquul ah. Haddii aadan u baahnayn faylal cayriin ah oo aan la cadaadin markaa maxaad u tahay inaad bixiso? Hagaag hadda ma samaynaysid. Muqaalladayada ayaa dhamaantood la jaan qaadaya Final Cut, iMovie, Premier iyo dhammaan suites tafatirka kale iyo softwares video. Shatiga fiidyaha fudud oo xarrago leh - VidLib. App-ka waxaa lagu taageeraa dhammaan dhufto ee viz Android, iOS iyo Windows.
Arrimo aad u yar oo la arkay inta barnaamijku kobcayo ayaa maareynay shabakado badan oo fiidiyoow ah oo ku saabsan Windows iyo maaraynta Xusuusta
Dhammaan arrimahan waxaa lagu xaliyay adeegsiga sirdoonka macmal algorithm halkaas oo fiidiyowyada iyo xusuusta si hufan loo maamulay.
Ku soo dejiso faylasha HD kombiyuutarkaaga - VidLib, adeegsadayaashu waxay ku soo dejisan karaan feylasha HD kombiyuutarradooda adoo adeegsanaya emayl si ay wax uga beddelaan Goynta kama-dambeysta ah.
Helitaanka in ka badan 30000 clips - VidLib waa noocyo dhowr ah oo clips ah oo loogu talagalay isticmaalayaasha inay ka doortaan sidaas awgeedna ka caawiya xirfadleyda inay liisan siiyahooda ku sii socdaan.
Si toos ah ugu dejiso qalabka - Isticmaalayaashu waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay si toos ah ugu soo dejistaan ​​barnaamijyadooda aaladda ama ay ugu soo diraan cinwaanka kombiyuutarkooda.